भाग्यमानी पुरुषसँग हुने यी कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? एक पटक अबस्य पढ्नुहोस् – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/भाग्यमानी पुरुषसँग हुने यी कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? एक पटक अबस्य पढ्नुहोस्
भाग्यमानी पुरुषसँग हुने यी कुरा, तपाईसँग छ कि छैन ? एक पटक अबस्य पढ्नुहोस्
सुख र दुःख आउँछ जान्छ । त्यसैले भन्छन नि कुनै पनि मानिस कहिल्यै पनि सुखी वा दुखी भईराख्दैन । यसै प्रसंगलाई लिएर महाभारतमा पनि विदुरले भनेका छन्, यदी कुनै मासिनको जीवनमा यी कुराहरु प्राप्त छन भने उ कहिल्यै पनि दुःखी हुँदैन । यो कुरा महाभारतको उद्योग पर्वमा उल्लेख छ ।
धन सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि धनसम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ । धन बिना कुनै रो’गको उपचार सम्भव छैन । वृद्धावस्थामा पनि धनको ठूलो साहारा चाहिन्छ । यसर्थ मानसम्मान, शिक्षादीक्षा, परिवारको पालनपोषण, र रो’गलाग्दा उपचारको लागि धनको अति आवश्यक हुन्छ ।
निरोगी शरीर जीवनमा सदैव सुखी रहनको लागि शरीर स्वस्थ हुनु जरुरी छ । यदी शरीरमा कुनै रो’ग छ भने तपाई राम्रो सँग कुनै पनि काम गर्न सक्नु हुन्न । यस्तो अवस्थामा तपाईं जीवनका हरेक कुराबाट बञ्चित हुनुहुन्छ । यदी तपाईंमा साना साना रो’गहरु छन् भने पनि तपाईं कुनै काम राम्ररी गर्न सक्नु हुन्न । श्रम नगरी खान पाईंदैन । श्रम गर्नका लागि शरीर स्वस्थ्य हुनु प¥यो । स्वस्थ्य शरीर नै एकप्रकारले सुखी जीवन हो इश्वरको बरदान हो ।
सुन्दर पत्नी महाभारतमा महात्मा विदुरले भनेका छन्, सुन्दर श्रीमती हुनु पनि एक प्रकारको सुख हो । कारण घरमा सुन्दर पत्नी हुनाले तपाईंको ध्यान बाहिर भ’ड्किदैन । घरमा श्रीमतीसँग हुने व्यवहारबाट तनाब मु’क्त भएपछि तपाइको बाहिरीयासँग सम्बन्ध रहँदैन र अनेकौ समस्याबाट ब’च्न सक्नु हुन्छ । समयमा घरमा आइन्छ । आपसी छलफल र सद्व्य’वहारबाट नै घर परिवार संचालन हुन सक्छ ।
मीठो बोल्ने पत्नी सुन्दर त्यस पछि पनि मीठो बोल्ने श्रीमती पाउनु भनेको सुनमा सुगन्ध हो । त्यो पनि अर्को सुख हो । जसले नम्रता पूर्वक कुरा गरेर परिवारका हर सद’स्यलाई सुख राख्न सक्छिन् । यदी न’मीठो बोल्ने श्री’मती घरमा छन भने दिनहू घरमा विवाद भई रहन्छ र घरको वातावरण अशान्त हुन्छ । यसप्रकार कर्कशा श्रीमती हुनेको घरमा न परिवारले सुख पाउँछ न इ’ष्टमित्र आउँछन् न छर छिमेकि । न उनीहरुको सहयोग प्राप्त हुन्छ । एच खबर बाट ।
दाङमा सशस्त्र प्रहरी जवान मृ,त अवस्थामा फेला परेका छन् ।
वेवारिसे बच्चा भेटियो भन्दै नाटक रचिएको खुलासा भएपछि पुष्पाको घरमा पुगे भाग्य न्यौपानेले, सहयोग रकम फिर्ता मागे (भिडियो हेर्नुस्)
दुखको खबर ! कन्चनको अवस्था गम्भीर तेस्रो पटक भेन्टिलेटरमा राखियो (भिडियो हेर्नुस्)
नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज असार २८ गते आइतबारको रा’शिफल !